OTU ESI ETINYE PASWỌỌDỤ NA LAPTỌỌPỤ - NCHEDO (NJE) - 2019
Otu esi etinye paswọọdụ na laptọọpụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ichebe laptọọpụ gị site na ịnweta ohere n'enweghị ikike, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume na ị ga-achọ itinye paswọọdụ na ya, na-enweghị ihe ọmụma nke onye ọ bụla nwere ike ịbanye na usoro ahụ. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ, ihe kachasị mkpa bụ ịtọọ paswọọdụ iji banye Windows ma ọ bụ itinye paswọọdụ na laptọọpụ na BIOS. Hụkwa: Otu esi edozi paswọọdụ na kọmputa.
N'ime ntuziaka a, a ga-atụle ụzọ abụọ a, a na-enyekwa nkọwa dị mkpirikpi na nhọrọ ndị ọzọ maka ichebe laptọọpụ na paswọọdụ, ma ọ bụrụ na ọ nwere data dị mkpa dị mkpa na ọ ga-ewepụ ohere nke ịnweta ya.
Ịtọ ntọala Windows nbanye
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji debe paswọọdụ na laptọọpụ bụ iji wụnye ya na sistemụ arụmọrụ Windows n'onwe ya. Usoro a abụghị ihe a pụrụ ịtụkwasị obi (ọ dị mfe iji tọgharịa ma ọ bụ chọpụta paswọọdụ na Windows), ma ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka onye ọ bụla ghara iji ngwaọrụ gị mgbe ị kwagara ruo oge ụfọdụ.
2017 melite: Ntuziaka iche maka ịtọ ntọala maka ịbanye n'ime Windows 10.
Iji setịpụ paswọọdụ na Windows 7, gaa na nchịkwa nchịkwa, gbanye anya "Iyi" wee mepee ihe "Akaụntụ Akaụntụ".
Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa "Mepụta paswọọdụ maka akaụntụ gị" ma debe paswọọdụ, kwenye paswọọdụ na ihe ncheta maka ya, wee tinye mgbanwe ahụ.
Nke ahụ niile. Ugbu a, mgbe ọ bụla ị gbanye laptọọpụ, ị ga-achọ itinye paswọọdụ tupu ịbanye na Windows. Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ịpị igodo Windows + L na keyboard iji gbochie laptọọpụ tupu ịbanye paswọọdụ n'enweghị agbanye ya.
Windows 8.1 na 8
Na Windows 8, ị nwere ike ime otu ihe ahụ na ụzọ ndị a:
Gaa na nchịkwa nchịkwa - ihe ndekọ njirimara ma pịa ihe "Gbanwee akaụntụ na windo ntọala Kọmputa" gaa na nkwụsị 3.
Mepee pane nke Windows 8, pịa "Nhọrọ" - "Gbanwee ntọala kọmputa." Mgbe nke ahụ gasịrị, gaa na "Akaụntụ".
Na njikwa akaụntụ, ị nwere ike ịtọ paswọọdụ, ọ bụghị naanị paswọọdụ ederede, mana yana paswọọdụ ma ọ bụ koodu ntanye dị mfe.
Zọpụta ntọala, dabere na ha, ị ga-achọ itinye paswọọdụ (ederede ma ọ bụ ihe ngosi) ịbanye n'ime Windows. Yiri Windows 7, ị nwere ike igbachi usoro ahụ n'oge ọ bụla na-enweghị gbanyụọ laptọọpụ site na ịpị igodo Win + L na keyboard maka nke a.
Otu esi etinye paswọọdụ na BIOS nke laptọọpụ (ụzọ a pụrụ ịdabere na ya)
Ọ bụrụ na ịtọye paswọọdụ na laptọọpụ BIOS, ọ ga-abụ ihe a pụrụ ịdabere na ya, ebe ị nwere ike ịtọgharịa paswọọdụ na nke a naanị site n'iwepu batrị site na laptọọpụ microboard (na-enweghị obere). Nke ahụ bụ, ichegbu onwe gị maka eziokwu ahụ na onye ọ bụla na-anọghị gị ga-enwe ike ịgbanwuo ma rụọ ọrụ n'azụ ngwaọrụ ahụ ga-enwe obere ọfụma.
Iji tinye paswọọdụ na laptọọpụ na BIOS, ị ga-ebu ụzọ banye n'ime ya. Ọ bụrụ na ịnweghị laptọọpụ kachasị ọhụrụ, mgbe mgbe ị na-abanye BIOS, ị ghaghị ịpị bọtịnụ F2 mgbe ị na-agbanye (a na-egosipụtakarị ozi a na ala nke ihuenyo mgbe agbanyere ya). Ọ bụrụ na ị nwere ụdị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ, mgbe ahụ isiokwu ahụ Ị ga - esi banye BIOS na Windows 8 na 8.1 nwere ike ị baara gị uru, ebe igodo igodo ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ.
Nzọụkwụ ọzọ ị ga-achọ ịchọta na ngalaba BIOS ebe ị nwere ike ịtọ paswọọdụ Onye ọrụ (Paswọdu Onye ọrụ) na Nlekọta Paswọdu (onye nchịkwa paswọọdụ). Ozuru iji setịpụ Onye Ntuziaka Onye Ọrụ, na nke a, a ga-agwa paswọọdụ iji gbanye kọmputa (buut na OS) na ịbanye ntọala BIOS. Na ọtụtụ laptọọpụ, a na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ, M ga-enye ọtụtụ nseta ihuenyo ka ị wee hụ kpọmkwem otú.
Mgbe e debere paswọọdụ, gaa Nsipụ ma họrọ "Chekwaa ma wepụta Ntọala".
Ụzọ ndị ọzọ iji chebe laptọọpụ gị na paswọọdụ
Nsogbu na ụzọ ndị a kọwara n'elu bụ na paswọọdụ dị otú ahụ na laptọọpụ naanị na-echebe n'aka onye ikwu gị ma ọ bụ onye ọrụ ibe - ha agaghị enwe ike ịtọ, egwu ma ọ bụ na-ele na Ịntanetị na-abanyeghị na ya.
Otú ọ dị, data gị n'otu oge na-anọgide na-enweghị nchebe: dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị wepu diski ike ma jikọọ ya na kọmputa ọzọ, ha niile ga-enwe ike ịnweta n'ụzọ zuru oke n'enweghị okwuntughe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nche data, mgbe ahụ, mmemme iji zoo data ga-enyere aka, dịka ọmụmaatụ, VeraCrypt ma ọ bụ Windows Bitlocker - ọrụ ntinye ya nke Windows. Ma nke a bụ isiokwu maka isiokwu dị iche.